Soomaaliya, 14 January 2020
Talaado 14 January 2020
Galka Baarista: Weerarada Al-Shabaab ee ka dhanka ah rayidka
Barnaamijka Galka Baarista waxa uu ku saabsan yahay weerarada iyo qaraxyada kooxda Al-Shabaab ay la beegsadaan shacabka, xilli kooxdan ay sheegatay inaysan si toos ah u beegsan dadka rayidka ah.
Koonfur Galbeed iyo HirShabeelle oo heshiis gaaray
Maamul goboleedyada HirShabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay ku heshiiyeen iskaahsi dhow oo ay yeeshaan oo ku saabsan amnig, horumairnta iyo kaabayaasha dhaqaalaha.
Aqalka Sare oo saxiixay sharciga saxaafadda
Aqalka Sare ee Soomaaliya ayaa ansixiyey sharciga saxaafadda oo mar kale dib u eegis lagu sameeyey, kaasi oo ay horey usoo ansixiyeen aqalka hoose ee baarlamaanka.
Ciidamada dowladda oo qabsaday deegaanka Tooratoorow
Cidiamada dawladdda Soomaaliya ayaa la sheegay inay saaka qabsadeen degaanka Tooratoorow oo ka tirsan Gobolka Shabeellada Hoose.
Kulankii Biixi iyo mucaaradka oo la isku fahmi waayey
Kulan maanta ku dhexmaray Madaxtooyada Somaliland Gudoomiyeyaasha Xisbiyada Mucaaridka iyo Madaxweynaha ayaa lagu guuleysan waayay in lagu dhameeyo murankii siyaasadeed ee u dhexeeyey labada dhinac.
Qoyska Caaisha Ilyaas oo soo Dhaweeyay Go'aanka Puntland.
Aabe Ilyaas Aden ayaa soo dhaweeyay go'aanka maanta ka soo baxay xeer-ilaaliyaha Puntland oo lagu sheegay in 11-ka bisha danbe ee Febraayo la qisaasi doono 3-da nin ee ka danbeeyey falkii kufsiga iyo dilka ee loo geystay gabadhiisa Caaisha Ilyaas.
Muqdisho: Caruur Gaajo u Dhimatay
Saddex caruur ah oo ay labo mataanno yihiin ayaa toddobaadkan gudihiisa la sheegay inay gaajo darteed ugu dhinteen xero barakacaal oo ku taalla duleedka Muqdisho. Ehellada caruurtan ayaa VOA u sheegay in caruurtan ayaydood oo daryeeli jirtay ay ku dhimmatay qaraxii ka dhacay ex-koontarool
Xildhibaanada Galmudug oo la dhaariyay
Xildhibaannada cusub ee Galmudug oo galabta lagu dhaariyay magaalada Dhusamareeb ee xarunta maamulkaasi. Maalintii shalay ayaa guddiga doorashada ee maamulka Galmudug uu shaaciyey liiska 83 xildhibaan oo noqonayo xubnaha soo dooran doona madaxweynaha cusub ee maamulka Galmudug.
Barnaamijka Dhacdooyinka Todobaadka
Liiska xildhibaanada cusub ee Galmudug oo la baahiyey
Wararka ka imanaya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in la baahiyey liiska xildhibaannada cusub ee Galmudug ee soo dooran doona hoggaanka maamulkaasi.
Ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab oo ku dagaalamay Sh/Hoose
Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada dawladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab uu maanta ka dhacay degaan u dhexeeya Afgooye iyo Wanlaweyn.